May 6, 2008, 6:32 pm Filed under: Articles ဒုက္ခနဲ့သောကမုန်တိုင်းတွေ ၀င်နေချိန် (၇)ရက်နေ့တိုင်း တင်ပေးနေကျ အမှတ်တရ၀တ္ထုတို သို့မဟုတ် ဆောင်းပါးအတွက် ဘာအကြောင်းအရာဖော်ပြပေးရမလဲ ကျွန်မစဉ်းစားနေမိတယ် .. ။ ရင်ထဲမှာ လူတိုင်း စိတ်ထိခိုက်နေကြမှာလည်း ဖြစ်တဲ့အတွက် `မိမိလုပ်နိုင်တာကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ပေးလိုက်ပါ´လို့သာ ပြောချင်မိပါတယ်။ ဆိုးရွားလွန်းလှသော အခြေအနေတစ်ခုမှာ ဘေးအန္တရာယ်တွေကလည်း ထပ်ရောက်ကျရောက်နိုင်တာကို မြင်တွေ့သိရှိရတဲ့အတွက်လည်း အင်မတန်ထိတ်လန့်ခဲ့မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် .. ခြေလှမ်းတွေမပြီးသေးဘူး .. ။ ရှေ့ဆက်ရဦးမယ် .. ။ မဆုံးသေးတဲ့လမ်းကို အားလုံးဆက်လျှောက်ကြရဦးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီလ ၇ ရက်နေ့အတွက်က ဆရာနန္ဒာသိန်းဇံရေးသားသော `ပြန်လည်ကောက်ယူရသောအရာ´ဆောင်းပါးလေးကိုပဲ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
May 7, 2008 @ 11:05 am Reply	thanksalot.
Comment by aprilborn
July 17, 2008 @ 4:28 am Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI